Ofdị mbipụta 3D: ihe niile ịchọrọ ịma gbasara usoro a | Akụrụngwa n'efu
Ofdị mbipụta 3D: ihe niile ịchọrọ ịma banyere usoro a
na Ndị na-ebipụta 3D na-na-dị ọnụ ala karịa na-ewu ewu karị, na ha ụdị dị iche iche nke mbipụta 3D, na ha na-eji maka ọtụtụ ngwa. Ọ bụghị naanị na ha na-ebipụta ihe ndị nwere akụkụ atọ maka ndị na-eme ya, ndị injinia, ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ, wdg.
Ọ bụrụ na ị na-atụle zụta ihe nbipute 3D maka ụlọ ma ọ bụ maka azụmahịa gị, ị kwesịrị ịma ụdị ụdị mbipụta 3D, ọdịiche, wdg. Na mgbakwunye, ị ga-amarakwa ụfọdụ igodo ka ịhọrọ nke ọma ngwa ọrụ ọhụụ gị ...
1 Kedu otu esi ahọrọ onye na-ebi akwụkwọ 3D na ụdị nke mbipụta 3D?
1.1 Ofdị ihe:
1.2 Ofdị mbipụta 3D
1.3 Ihe nbipute
Kedu otu esi ahọrọ onye na-ebi akwụkwọ 3D na ụdị nke mbipụta 3D?
Ọbụghị naanị ụdị ụdị mbipụta 3D ka ị na-ahọrọ ihe obibi 3D, ọtụtụ mpaghara ndị ọzọ na-arụkwa ọrụ. Iji mee ezigbo nhọrọ, ị kwesịrị ilekwasị anya ajụjụ atọ dị mkpa:
Ego ole ka m nwere ike imefu? Ga-ahụ ndị na-ebi akwụkwọ dị ọnụ ala, site na narị euro ole na ole, na ndị ọzọ na-efu puku kwuru puku euro. Ihe niile ga-adabere na ịchọrọ ma ha ga-eji ụlọ ma ọ bụ maka ọrụ ndị ọkachamara.
Maka gịnị? Ajụjụ ọzọ dị mkpa. Ọbụghị naanị maka ọnụahịa ahụ, kamakwa maka arụmọrụ nke ngwa nbipute 3D. Dịka ọmụmaatụ, iji mepụta obere ụlọ, ị gaghị echefu oke na ọ pere mpe ma nwee obere ọsọ. Mana iji mee ụdị ndị buru ibu karị, ị ga-achọ ndị na-ebi akwụkwọ gafere 6 ma ọ bụ 8 ″.
Kedu ihe ndị m chọrọ? Maka akụkụ ụlọ, ya na polymer ndị a na-ahụkarị dị ka PLA, ABS, PETG, wdg, ọ ga-ezu. Kama nke ahụ, ụfọdụ ngwa ọkachamara / ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere ike ịgụnye iji akwa, ọla, naịlọn, wdg.
Dabere na ihe ndị achọrọ na akụkụ ahụ, ị ​​ga-achọ otu ma ọ bụ ụdị ụdị echiche ọzọ. O doro anya, ndị na-ebi akwụkwọ ụlọ, nke m ga-elekwasị anya, anaghị anabata ụdị ihe niile. Ọ bụ otu n'ime nkọwa egosiri, na filaments na-emekarị na-akwado bụ:
Mpịakọta nke filaments na-adịkarị ọnụ ala, a na-ere ya n'ogologo na ogologo. Dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike isi na 1.75mm gaa 3mm. Okpukpo aghaghi aghaghi ichota ya site na isi extrusion nke ngwa nbipute 3D gi.
ABSAcrylonitrile butadiene styrene bụ thermoplastic a na-ahụkarị (ịmaatụ: A na-esite n'ihe a mepụta mpempe LEGO). A naghị emebi emebi, mana ọ siri ike ma nwee nkwenye siri ike iji wuo ụlọ siri ike. O nwekwara oke nguzogide kemịkal, ọ na-agbaze naanị na acetone. Ọ na-eguzogide nke ọma na abrasion, na ọnọdụ okpomọkụ, mana enwere ike imebi ya ma ọ bụrụ na ahapụ ya n'èzí n'ihi ikpughe UV.
PLA- Polylactic acid bu ihe eji emebi ihe (sitere na mkpuru osisi, dika oka), ya mere o di nma na gburugburu ebe obibi ma enwere ike iji ya mee oru ugbo. Ọ bara uru maka iji ya dị ka arịa kichin, dị ka iko, plastik, cutlery, wdg. Ọ bụ ezie na ngwụcha adịghị mma dịka ABS, ọ nwere nnukwu gloss.
HIPSMmetụta polystyrene dị elu yiri ABS, ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe a na-ahụkarị dị ka ndị gara aga.
PET: Polyethylene terephthalate na-adịkarị na karama nke mmiri ịnweta mmiri ma ọ bụ ihe ọ softụ softụ dị nro, yana na ngwugwu nri ndị ọzọ. Ọ bụ uzo na-eguzogide ọgwụ na-emetụta nke ọma.
Laywoo-d3: Ọ nwere ike ịgbanwe agba (ọkụ / ọchịchịrị) na ọnọdụ okpomọkụ, nke na-enye ya ọtụtụ ọrụ maka iji ya na ụfọdụ ngwa ndị metụtara njikwa ọnọdụ okpomọkụ. Njirimara ya yiri PLA, o siri ike, na ọdịdị ya yiri osisi, na veins.
ninjaflex: elastomer thermoplastic (TPE) bụ ihe ọhụrụ na-agbanwe agbanwe, nwere nnukwu mgbanwe. Ọ bụrụ na ị na-achọ ime iberibe ihe na-emegharị, nke a bụ ihe ị na-achọ.
Naịlọn: Ọ bụ ihe a ma ama (na-abụghị polymer), ụdị eriri maka akwa eji akwa akwa, eriri, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ dịghị mfe ịchịkwa, ya mere nkọwa nke iberibe agaghị adị ezigbo mma, ọ na-eburu mmiri. Na ihu ọma ya ọ nwere nnukwu iguzogide ọnọdụ okpomọkụ na nrụgide.
Enwere otutu ihe ndi eji eji ihe di iche di iche iche karie ka ichota nke kacha amasị gi. Na mgbakwunye, enwere ndị nwere ọtụtụ ụdị. Ọ bụrụ na ị ga-eji ihe agba mechara ihe ahụ, agba ahụ agaghị adị mkpa. Enwekwara, dị ka m kwuru, na-agbanwe na ọnọdụ okpomọkụ, na e nwere ọbụna ndị nke phosphorescent nke mere na ha na-enwu n'ọchịchịrị ma ọ bụ mgbe ekpughere radieshon UV. Enwere ọbụna ụfọdụ ihe ndị na-eduzi ọkụ eletrik, iji nwee ike ibipụta egwu nwere ike iji ya na sekit ...
Ofdị mbipụta 3D
Na mgbakwunye na ihe, ha dịkwa mkpa ụdị nke mbipụta 3D. Dị ka mgbe ị na-ahọrọ akwụkwọ obibi akwụkwọ ị chere na ọ bụrụ na ịchọrọ onye nbipute inkjet, ma ọ bụ laser, LED, wdg, mgbe ị na-ahọrọ onye na-ebi akwụkwọ 3D ị kwesịrị ị youa ntị na teknụzụ ọ na-eji, ebe ọ ga-adabere na ya. arụmọrụ na nsonaazụ:
FDM (Ntughari ntinye aka) ma obu FFF (Fused Filament Fabgha): Ọ bụ ụdị nchara a wụrụ awụ ịme ngosi uwe nke polima. A na-eme ka filament ahụ dị ọkụ ma gbazee maka extrusion. Isi ga-agagharị na X, Y na-achịkọta dị ka ozi dị na faịlụ ebipụta iji weghachi ihe ahụ. Ikpo okwu nke etinyere ya bụkwa mobile na nke a, ọ ga-agagharị na ntuziaka Z iji mepụta akwa site na oyi akwa. Uru nke usoro a bụ na ọ dị mma na ngwa ngwa, ọ bụ ezie na ọ gaghị adabara ụdị ndị nwere akụkụ nke na-apụta oke oke, ebe ọ bụ na eme ya site na ala elu.
SLAs (StereoLithography): stereolithography bụ usoro ochie dị mma nke ejiri mmiri resin na-eme ihe ga-eme ka laser sie ike. Nke a bụ otú e si kee oyi akwa ruo mgbe e mechara nweta njedebe ikpeazụ. O nwere oke ike dịka FDM, mana ọ na-enweta ihe nwere ezigbo ihu na ọtụtụ nkọwa.
DLP (Digital Light nhazi)- Nhazi ọkụ dijitalụ bụ otu ụdị mbipụta 3D yiri SLA, mana ọ na - eji photopolymers na - eme ka mmiri sie ike. Nsonaazụ bụ ihe nwere ezigbo mkpebi ma sie ezigbo ike.
SLS (Nhọrọ Laser Sintering): Nhọrọ laser na-ahọrọ yiri DLP na SLA, mana kama mmiri mmiri ha na-eji ntụ ntụ. A na-eji ya maka ndị na-ebi akwụkwọ naịlọn, aluminom, na ihe ndị ọzọ nke ụdị a. Laser ahụ ga-agbaso ntụ ntụ iji mepụta ihe ndị ahụ. Nwere ike ịmepụta ihe siri ike ịmepụta akụkụ site na iji ebu ma ọ bụ extrusion.
SLM (Nhọrọ Na-agbaze Laser): ọ bụ nnọọ elu ma dị oké ọnụ technology, yiri SLS. A na-eji agbaze laser ahọrọ, ma ejiri ya na ụlọ ọrụ iji gbazee ntụ ntụ ma mepụta akụkụ.
EBM (Electron Doo agbaze): Teknụzụ a dịkwa oke oke ma dị oke ọnụ, na-echekwa maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ọ na - eji ngwakọta nke ihe eji eji ihe elektrọn eme ihe. Ọbụna ọ nwere ike gbazee ntụ ntụ na-erute okpomọkụ nke ruru 1000ºC. Completedị zuru oke ma dị elu nwere ike ịmepụta.
M (Laminated Obere Manufacturing): bụ otu n'ime ụdị mbipụta 3D nke na-eji arụ ọrụ laminate. A na-eji mpempe akwụkwọ, akwa, ọla ma ọ bụ plastik mee ihe owuwu. A na-esonye n'ígwé ndị a site na nrapado wee belata site na laser. Ọ bụ maka ọrụ ụlọ ọrụ.
B.J. (Jetting Jetting): nragide injection na-ejikwa industrially. Jiri ntụ ntụ, dị ka ụfọdụ usoro ndị ọzọ. Uzuzu ahụ na-abụkarị plasta, ciment ma ọ bụ nyocha ọzọ nke ga-esonye n'ígwé. A pụkwara iji ọla, ájá ma ọ bụ plastik mee ihe.
MJ (Ngwaọrụ Jetting): ịmịnye ihe bụ ihe ọzọ nke teknụzụ obibi 3D eji na ụlọ ọrụ ọla. Ọ na-e ji ruo ọtụtụ afọ, na-enweta ihe dị ukwuu mma. A na-ewu ọtụtụ ụlọ n'elu ibe ha iji mepụta ibe siri ike. Isi na-agbanye ọtụtụ narị obere ụmụ irighiri mmiri nke photopolymer wee gwọọ (mee ka ha sie ike) site na ìhè ultraviolet (UV).
MSLA (SLA masked): Ọ bụ ụdị nke masked SLA, ya bụ, ọ na-eji ihe eji eme ihe na-enwu ọkụ dị ka isi iyi, na-enwupụta ultraviolet site na ihuenyo LCD nke na-egosi otu mpempe akwụkwọ dị ka nkpuchi, ya mere aha ya. Can nwere ike nweta oge dị elu dị elu dị ka ọkwa ọ bụla gosipụtara LCD kpamkpam n'otu oge, kama ịchọta ebe na laser n'ọnụ.
DMLS (Ntanetị Metal Laser)- Ọ na - ewepụta ihe n’ụzọ yiri nke ahụ SLS, mana ihe dị iche bụ na ntụ ahụ anaghị agbaze, mana ọ na - ewe iwe ya na laser ruo n’otu ebe a ga - etinye ya na ọkwa molekụl. N'ihi nrụgide ahụ, iberibe ahụ na-abụkarị nke na-emebi emebi, ọ bụ ezie na ha nwere ike ịdabere na usoro okpomọkụ na-esote iji mee ka ha sie ike.
DOD (Idebe On Nchọta)Idebe-na-ina-ebi akwụkwọ bụ ụdị ọzọ nke 3D obibi. Ọ na-eji jets ink abụọ, otu na-etinye ihe owuwu ihe na nke ọzọ ihe na-agbaze maka nkwado. Ọ na -emepụtakwa akwa site na oyi akwa dị ka usoro ndị ọzọ, mana ha na-ejikwa ihe eji efe efe na -eme ka ebe ahụ wuo iji mepụta akwa ọ bụla. N'ihi ya, a na-enweta ihu igwe dị larịị n'ụzọ zuru oke. A na-eji ha eme ihe na ụlọ ọrụ maka oke nkenke ma ọ bụ iji mee ihe.
Ọ bụghị ihe ndị a niile ka eji arụ ụlọ, ụfọdụ ezubere maka azụmaahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Na mgbakwunye, enwere ụzọ ọhụụ ndị ọzọ na - apụta, ọ bụ ezie na ha anaghị ewu ewu.
3D na-ebi akwụkwọ, n'agbanyeghị nke ụdị nke 3D obibi, nwekwara a ọnụ ọgụgụ nke njirimara teknụzụ nke ga-ekpebi arụmọrụ. Ihe kachasị mkpa ị kwesịrị ịma bụ:
Bipụta ọsọ: na-anọchite anya ọsọ nke onye nbipute ga-emecha bipụta akụkụ ahụ. A tụrụ ya na millimeters kwa nke abụọ. Ha nwere ike ịbụ 40mm / s, 150mm / s, wdg. Ọ dị elu karịa, obere oge ọ ga-ewe iji rụchaa. Buru n'uche na ụfọdụ iberibe, ma ọ bụrụ na ha buru ibu ma dị mgbagwoju anya, nwere ike ịnwụ ọtụtụ awa ...
Injector: ọ bụ mpempe akwụkwọ dị mkpa, ebe ọ bụ na ọ ga-ahụ maka ịdebe ihe iji mepụta ihe ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị ụdị mbipụta 3D niile chọrọ otu, ebe ụfọdụ ọrụ na mmiri mmiri na ọkụ. Mana otutu ndi ulo nwere ya, ha mejuputara ihe ndia:
Hot n'ọnụ: bụ akụkụ kachasị mkpa. Ọ bụ ọrụ maka ịgbaze filament ahụ site na okpomọkụ. Ọnọdụ okpomọkụ a ruru ga-adabere n'ụdị ihe ndị a nabatara. Ọ dị mkpa ịhọrọ sistemụ nwere onye na-arụ ọrụ oyi.
Nozulu: bu isi oghere, ya bu, ebe filament gwakọtara na-apụta. Enwere ndị buru ibu nwere njigide na ọsọ ọsọ ka mma, mana yana mkpebi dị ala (obere nkọwa). Ndị obere dị nwayọ nwayọ, mana ọ dabara nke ọma iji mepụta ụdị mgbagwoju anya nwere nnukwu nkọwa.
Ihe omuma: ngwaọrụ dị n'akụkụ nke ọzọ nke ọnụ ọkụ dị ọkụ. Ọ bụkwa ya na-ahụ maka ịgbụpụta ihe a wụrụ awụ. Nwere ike ịchọta ọtụtụ ụdị:
Nduzi: ha nwere njikwa ka mma na ịdị mfe nke ọrụ. Ha na-aha ya bụ n'ihi na ha na-eri nri site n'ọnụ na-ekpo ọkụ n'ọnụ.
Bowden: N'okwu a, filament a wụrụ awụ ga-eme njem dịtụ n'etiti etiti dị ọkụ na onye na-eme ihe nkiri. Nke a na-amụnye usoro injector, na-ebelata mkpọtụ ma na-ekwe ka ọ gaa ngwa ngwa.
Ihe ndina na-ekpo ọkụ: Ọ dịghị ugbu a na ndị na-ebi akwụkwọ niile, mana ọ bụ nkwado ma ọ bụ ntọala nke akụkụ ahụ na-ebipụta. Akụkụ a nwere ike iwe iwe iji hụ na akụkụ ahụ anaghị efunahụ okpomọkụ ya n'oge usoro obibi akwụkwọ, na-enweta nsonaazụ ka mma. Nke a dị mkpa maka ihe ndị dị ka naịlọn, HIPS, ma ọ bụ ABS. Ma ọ bụghị ya, oyi akwa ọ bụla agaghị adịgide nke ọma na nke ọzọ. Ndị na-ebi akwụkwọ maka PET, PLA, PTU, wdg, achọghị akwa dị ọkụ, ma jiri isi oyi.
Fan- N'ihi oke okpomọkụ, ndị na-ebi akwụkwọ na-enwekarị ndị fan iji mee ka usoro ahụ dị jụụ. Nke a dị mkpa iji dobe ntụkwasị obi nke ngwa nbipute.
STL: dị ka ị pụrụ ịhụ na isiokwu nke na-ebi akwụkwọ software, ọtụtụ ndị na-ebi akwụkwọ anabatala usoro ọkọlọtọ STL. Gbaa mbọ hụ na onye nbipute gị na-anabata ụdị faịlụ a.
SoporteỌ bụ ezie na ndị na-ebi akwụkwọ kachasị ewu ewu na Windows, macOS na GNU / Linux, ị kwesịrị ị na-elebara anya ma enwere ndị ọkwọ ụgbọala maka usoro gị.
MkponyeakaSomefọdụ ndị na-ebi akwụkwọ na-agụnye ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ nwere ike ịmasị, dị ka ihe ngosi LCD nwere ozi gbasara usoro ahụ, njikọta WiFi iji jikọọ ha na netwọkụ, igwe foto etinyere iji nwee ike ịse usoro obibi akwụkwọ, wdg.
Kpọkọtara ọnụ disassembled: Ọtụtụ ndị na-ebi akwụkwọ na-adị njikere ịtọpụ ma jiri (maka ndị na-enweghị uche), mana ọ bụrụ na ị na-achọ N'onwe Gị, ị nwere ike ịchọta ụfọdụ atụmatụ dị ọnụ ala ị nwere ike iji kpokọta ibe site na mpempe site na iji ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Ofdị mbipụta 3D: ihe niile ịchọrọ ịma banyere usoro a
gịnị bụ reactive ike? Ihe niile ị kwesịrị ịma
eProcessor: e mepụtara ihe izizi mepere emepe na Spen na Spain